उत्तर कोरियाका शासक किम जोन कोमामा पुगेकै हुन् ? - सिम्रिक खबर
उत्तर कोरियाका शासक किम जोन कोमामा पुगेकै हुन् ?
किम जोन उन, फाइल फोटो
उत्तर कोरियाका सर्वाेच्च नेता (शासक) किम जङ उन फेरि गम्भीर बिरामी परेको खबर सार्वजनिक भएको छ।
उनी अहिले कोमामा रहेकाले उत्तर कोरियाको शासन सत्ता उनकी बहिनी किम यो जोङले सम्हाल्न थालेको दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति किम डे जुङलाई उधृत गर्दै दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उन कोमामा पुगेको र उनकी बहिनीले शासन सम्हाल्न थालेको समाचारमा जनाइएको छ । उत्तर कोरियाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा यसअघि धेरै पटक किम जोन उनुको मृत्युको खबर आइसकेका थिए ।
केही दिनअघि मात्र किमले आफ्नी बहिनी यो जोङलाई थप अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाएकाे खबर सार्वजनिक भएकाे थियाे। न्युयोर्क पोस्टका अनुसार दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति किम डे जुङले आफ्नो देशका सञ्चारमाध्यमसँग ‘मैले थाहा पाएअनुसार उनी (किम जोङ उन) कोमामा छन्’ भनेका छन्। उनले जासुसमार्फत आफूले यो गोप्य कुरा थाहा पाएको दाबी गरेका छन्।
किमकी बहिनीलाई पहिलेदेखि नै उत्तर कोरियाको सत्ताको उत्तराधिकारीका रुपमा लिइँदै आएको छ। उत्तर कोरियाले पछिल्लो खबरबारे प्रतिक्रिया दिन बाँकी नै छ।